Basics yeOne-Peji Kugadziridza yeEcommerce | ECommerce nhau
Ipo peji rekumisikidza kwekutsvaga injini, ndokuti, kubatanidza kuvaka, kwakakosha, Pa-Peji optimization zvakare chinhu chinofanira kufunga nezvacho. Pa-Peji optimization inosanganisira zvese zviito zvinofanirwa kuitwa mukati memapeji eEcommerce yako kuti ubatsire kunatsiridza chinzvimbo chayo.
Chii chinonzi On-Peji optimization chinosanganisira muEcommerce?
Kana zvasvika kune ecommerce peji rekugadzirisa, pane zviri pachena zvakakosha zvibodzwa zvatinofanira kutarisa nezvazvo.
Kuenderana pamwe nharembozha
Kubatanidzwa nemasocial network
Kana isu tiri kutaura nezve keyword optimization, zvinofanirwa kuve neshuwa kuti iro peji rine iyo rakanyanya kukosha kiyi yakakosha munzvimbo dzakakosha. Izvi zvinosanganisira: zita remapeji, misoro, tsananguro yechigadzirwa, mufananidzo mazita mazita, mufananidzo alt tag, url, nezvimwe.
Nezve chimiro chesaiti, inofanirwa kutariswa kuti chinhu ichi chinogona kukanganisa zvakanyanya usability, chinzvimbo uye shanduko. Sezvineiwo, tarisa pane yakavakirwa saiti yekuvakisa, uko dhizaini inoda kuti mushandisi ashandise mashoma mashoma sezvinobvira kuenda kubva papeji rekumba kune peji yechigadzirwa.
Nezve iyo zvemukati zvinongedzo, Ichi chinhu chinokutendera kuti umise yako wega anchor zvinyorwa, izvo zvinogona kubatsira nekumisikidza yako makuru mazwi. Asi iwe unofanirwa kuve wakangwarira kushandisa zvemukati zvinongedzo zvine mwero nekuti kana zvikashandiswa zvakanyanya, Google inogona kufunga kuti urikuedza kuita chimwe chinhu chinonyumwira.
Pakupedzisira uye zvine chekuita nekushandisa, iyo Ecommerce saiti inofanirwa kuve neakareruka kushandisa. Chiitiko chikuru chevashandisi chinoreva kuti saiti iri nyore kushandisa, pamwe nekunakidza uye kubatsira. Chiitiko chikuru chevashandisi zvakare zvinoreva kuti vangangove vatengi vachapedza nguva yakawanda pane saiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Basics yeOne-Peji Kugadziridza yeEcommerce